जाँगरिला किसान, सिङ्गो बस्ती नै तरकारी खेतीमा
कात्तिक २१, २०७५
भीमदत्तनगर– कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–६ बालुवाफाँटामा अधिकांश किसान अन्नबाली छाडेर नगदेबालीका रुपमा तरकारी खेती गर्न थालेका छन् । तरकारीबाट मनग्य आम्दानी हुन थालेपछि यहाँका किसान व्यावसायिक रुपमा तरकारी खेतीमा लागेका हुन् ।
लामो समय वैदेशिक रोजगारीमा रहेर गाउँ फर्किएका आदिवासी जनजाति समुदायका युवा पनि तरकारी खेती गरेर आयआर्जन गरिरहेका छन् । “यहाँ तरकारी खेतीबाहेक अरु खेती देख्न मुश्किल पर्छ,” स्थानीय तरकारी खेती गर्दै आएका किसान हरिराम चौधरीले भने, “अरु खेतीभन्दा यसमा बढी मुनाफा भएर सबै तरकारीमै लागे ।” २०५८ सालमा चार कठ्ठा जमीनबाट तरकारी खेती शुरु गरेका हरिराम चौधरीले अहिले १५ बिगाहा जमीनमा तरकारी खेती गरेका छन् ।
“राम्रो आम्दानीसँगै तरकारी खेतीले जिल्लामै किसानमाझ आफ्नो परिचय बनाइदियो ।” उनले भने, “अहिले गाउँमै तरकारी खेतीको लहर चलेको छ ।” कुनै बेला आर्थिक अवस्थाले समस्या रहेको बताउँदै चौधरीले तरकारी खेतीबाट कमाइले धेरै सम्पति जोडेको बताए ।
“शुरुमा त धेरै समस्या थियो, जब मैले तरकारी खेती शुरु गरे राम्रो आम्दानी भएपछि खेती विस्तार गर्दै गए मेहनत गरे अहिले रामै्र छ,” उनले भने, “तरकारीले नै पाँच पटक सम्मान थाप्ने अवसर समेत पाए ।”
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, युवा स्वरोजगार र राष्ट्रपति पुरस्कारबाट समेत सम्मानित भएका चौधरीले तरकारीकै आम्दानीबाट कैलालीको अत्तरियामा जमीन खरीद गरेर घर बनाएका छन् । “तरकारीको कमाइले ट्र्याक्टर, अत्तरियामा घर बनाउनुका साथै एक बिगाहा जमीन जोडे ।” उनले भने, “मिहेनत गरे विदेशिनु पर्दैन ।” उनले तरकारी खेतीबाट वार्षिक रु १२ देखि १३ लाखसम्म आम्दानी हुने गरेको बताए ।
त्यस्तै बालुवाफाँटाका टेकबहादुर चौधरी पनि तरकारी खेतीमै व्यस्त छन् । दुई वर्ष कतारमा मजदूरी गरेर घर आएको चौधरीले अहिले १५ कठ्ठा जमीनमा तरकारी लगाएका छन् । “वैदेशिक रोजगार मन नपरेपछि यहाँ आएर एक कठ्ठाबाट तरकारी खेती थालेको थिए,” उनले भने, “खेती फष्टाउन थालेपछि बढाउँदै लगेको छु ।”
उनले तरकारी खपतका लागि बजारको समस्या नरहेको बताए । “तरकारी लिन जिप गाउँमै आइपुग्छन् ।” उनले भने, “गाडी नआएको दिन मोटरसाइकलमा भए पनि तरकारी बजार पुर्‍याउँछु ।”
कृष्णपुर नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष नत्थुराम चौधरीले गाउँमा ५० प्रतिशत किसान तरकारी खेतीमा लागेको बताए । “पहिले त धान गहुँमै जोड थियो ।” वडाध्यक्ष चौधरीले भने, “अहिले तरकारी खेती उचाइमा पुगेको छ ।” उनले किसानको प्रोत्साहनका लागि सरकार र स्थानीय तहले सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।
कात्तिक २१, २०७५ मा प्रकाशित
टन्सिलबाट आराम पाउन यी घरेलु उपाय गर्नुस्
स्थानीय सरकारको साहसिक निर्णय : जग्गा प्लटिङमा रोक !
नयाँ बर्षमा घुम्न जाने योजना छ ? यी हुन काभ्रेका गन्तव्यस्थल
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटको पूर्णपाठ
राणाकालीन दरबार बन्यो सुविधासम्पन्न होटल
यी हुन तेस्रो विश्वयुद्धमा प्रयोग हुने डरलाग्दा १० मिसाइल !
मायावतीले लोकसभा चुनाव नलड्ने काठमाडौं – भारतको बहुजन समाज पार्टीकी अध्यक्ष मायावतीले आउँदै गरेको लोकसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा नगर्ने घोषणा बुधवार गरेकी छन् । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मायावतीले आफ्नो सबै...
यसरी कांग्रेसले फेरि गुमायो गोवाको सत्ता
महिला साफ : श्रीलंकालाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा
बाबु बोगटीको त्यो होली : जसले उनलाई प्रहरी चौकी पुर्‍यायो !
विज्ञानले ईश्वरको हत्या नगरेको ब्राजिली वैज्ञानिक ग्लीजरको भनाइ
सरकारबारे गम्भीर समीक्षामा छौं, बढी नबोलौं, बिग्रिनसक्छ : प्रचण्ड [अन्तर्वार्ता] पूरा पढ्नुहोस
दीपाश्रीको होली सम्झना : ‘ज्वाइँको मुखमा गोबर दलेपछि १ वर्षसम्म बोलचालै बन्द’ [अन्तर्वार्ता] पूरा पढ्नुहोस
‘जनताले जे चाहन्छन्, त्यसै अनुसार हुन्छ’ [अन्तर्वार्ता] पूरा पढ्नुहोस
चीनको आर्थिक कूटनीति : अनुसरण गर्न लायक एक प्रतिमान
कमरेड विप्लवलाई खुलापत्र – जनताको जिउधनको रक्षा होस् !
समृद्धिको कसीमा कर्णाली : कहिलेसम्म बाँडिरहने कुहिएको चामल ?
March 17, 2019, 10:16 a.m. शान्ति र सुरक्षा : चनाखोपनको अपेक्षा पूरा पढ्नुहोस
March 10, 2019, 10:36 a.m. सीके राउतसँग भएको सहमतिले उब्जाएका प्रश्नहरू पूरा पढ्नुहोस
March 5, 2019, 10:31 a.m. सजग सेनाको दायित्व : राष्ट्रिय सुरक्षाबारे चनाखो भूमिका पूरा पढ्नुहोस